युवतीहरुले एक रातमा कति पटक शारिरिक सम्पर्क राख्न सक्छन् ? यस्तो छ अनुसन्धान – All top Here
Home/समाचार/युवतीहरुले एक रातमा कति पटक शारिरिक सम्पर्क राख्न सक्छन् ? यस्तो छ अनुसन्धान
4,0242minutes read
शारिरिक सम्पर्कका विषयमा मानिस खुलेर कुरा गर्न नसके पनि यो विषयमा जान–अञ्जान चासो भने बढी नै राख्ने गर्छन् । यस विषयलाई लज्जाको विषय ठान्नेहरु पनि लुकीलुकी यसकै विषयमा जानकारी लिन लालायित भेटिन्छन् । यसैले त शारिरिक सम्पर्कको विषय विश्वका लागि अध्ययन्को विषय बन्ने गरेको छ । यसमा विश्वमा धेरै अध्ययन् अनुसन्धान भएका छन् र अनौठो तथ्यहरु बाहिर आएका छन् ।
योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुन त यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर, किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । अमेरिकाको रट्जर्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र योनीमा हुने समान संवेदनशीलताको कारण यी दुई अङ्गबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो । योनी र भग्निशिखाको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई मस्तिष्कको जुन भागले ग्रहण गर्छ स्तनको टुप्पोको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई पनि सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ ।
त्यसैले केही महिलाहरु स्तनको स्पर्श वा सुम्सुम्याइबाटै चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ अर्थात् स्तनमा हुने यही संवेदनाको सञ्चार र स्नायु सम्बन्धका कारण स्तनको भरपूर स्पर्शले मात्र पनि महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छिन् ।
आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानकर्ताहरुले २३ देखि ५६ वर्षसम्मका ११ जना महिलालाई उनीहरुको योनी र स्तनलाई सुम्सुम्याउन अह्राएका थिए । यसरी सिर्जना हुने उत्तेजनाका बेला उनीहरुको मस्तिष्कमा हुने परिवर्तनको अध्ययन गर्न मस्तिष्कलाई ब्रेन स्क्यानरभित्र राखिएको थियो । त्यसक्रममा प्राप्त तस्वीरहरुले योनी र स्तन दुबैबाट प्रवाह हुने उत्तेजना स्नायु हुँदै मस्तिष्कको क्लस्टर अफ ग्रेप्स भन्ने ठाउँमा गएको पाइयो । पुरुषमा पनि लिङ्गबाट प्रवाहित हुने उत्तेजना सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ । यसरी समाउँदा बढी भन्दा बढी आनन्द आउँछ ।
एक रातमा कति पटक ?
विज्ञहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयश्क पुरुषले एक रातमा कति पटकसम्म शारिरिक सम्पर्क गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर, एक स्वस्थ तथा वयश्क पुरुषले चरम सुखानुभोगको आधारमा उसको मात्रा तथा तथा गन्ती गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ ।
अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त ? अण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्डकोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अङ्गलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सक्नुहुन्छ । तर याद गर्नुहोस्, तपाईंका प्रत्येक स्पर्ष अति नै नरम र सरल हुनुपर्छ किनकी छालाले नै तपाईले दिएको प्रत्येक झड्कालाई मष्तिष्कसम्म पुर्‍याउने काम गर्दछ ।
अण्डहरुलाई जोशमा कहिले नि थिच्ने अनि चेप्ने गर्नु हुँदैन जसले पुरुष मित्रको जोशलाई तत्काल नै खत्तम गरिदिन्छ ।
आफ्नो मित्रलाई सधैं सोध्नुस् कि तपाईंलाई उनको स्तन चुस्नका लागि अनुमति छ कि छैन । किनकी त्यो सबैलाई मन नपर्न सक्छ । मञ्जुर भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् । यो गुद्वार र अण्डकोष बीचको भाग हो । औंलाहरुले उत्सर्गतरालको बीच भागमा हल्का दबाव दिनु्स् । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई मज्जा लिन–दिन सक्नुहुन्छ । एजेन्सी
दैनिक १० जना भ्रष्टाचारीले हामफालेर मरेको सुन्‍न पाऊँ’
न्युरोड बजारमा भीषण आगलागी